​सुदूरपश्चिमका पहरेदारको सम्झना
मनऋषि धिताल नेपालको पश्चिमी सिमानामा भारतीय विस्तारवाद हस्तक्षेपसम्बन्धी बहस हुँदा श्रद्धेय दिवंगत नेता प्रेमसिंह धामीको स्मरण गर्छु । पश्चिम–उत्तरको कालापानी लिम्पियाधुरामा भारतीय बल मिच्याइँका ऐतिहासिक ६० वर्ष पुराना तथ्यको निक्र्याेल नलाग्दै २५ वर्षअघि महाकाली सम्झौताको विरुद्ध उभिएको सुदूरपश्चिमको एक नक्षेत्र प्रेमसिंह धामीको सम्झना ताजा भयो । ०५४ भदौ २६ गते बिहान वरिष्ठ पत्रकार रेशम विरही र मैले उनको अन्तर्वार्ता लिएका थियांै । पर्सिपल्ट भदौ २८ गते… विस्तृत समाचार
भूगोल बलियो कि इतिहास ?
तीर्थ सिग्देल प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको विषयले बजार तातेको छ । नेताहरूले नोट अफ डिसेन्टसम्म लेखेको खबर छ । यस्ताखाले प्रसंगले प्रभाव र असर पर्दा कस्ता मानिस नेतृत्वमा जान चाहन्छन् र गइरहेका छन् भन्ने सवाल खडा गर्छ । अहिलेको राजनीति भूगोल र इतिहासको चपेटामा परेको देखिन्छ । एकथरी भूगोलको राजनीति गरेर पछि परिरहेका छन् भने अर्काथरीले इतिहास भजाएर खाइरहेका छन् । ००७ सालको क्रान्तिपछिका परिवर्तनको लेखाजोखा… विस्तृत समाचार
लक्ष्मी पौडेल संविधान दिवसको दिन, मुलुकले उत्सव मनाइरहेका बेला राष्ट्रिय सभागृहमा गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानको निमन्त्रणा स्वीकारेर पुगेकी थिइन्, राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी । मञ्चमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायत । प्रतिष्ठानले पूूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालालाई मरणोपरान्त गणेशमानसिंह स्मृति स्वर्णपदकबाट सम्मान कार्यक्रम राखेको थियो । दर्शकदीर्घामा कांग्रेस कार्यकर्तासँगै पत्रकार थिए । देउवाले सरकारको कडा आलोचना गरे । विभिन्न मुद्दामा नेकपाप्रतिको असन्तुष्टि पोखे । राष्ट्रपतितिर… विस्तृत समाचार
नरेन्द्रजंग पिटर फोहोरमै झिँगा बस्छ । पहिलो कुरा घाउ पार्नै हँुदैन । पारे तुरुन्त उपचार गर्नुपर्छ । परिवर्तनको विश्वासमा आँच आउँदा प्रतिगमन सल्बलाउँछ । अंशमा टेकेर समग्रमा आक्रमण हुन थाल्छन् । केही दिनदेखि विभिन्न नाममा जनमतलाई भीडमा फेर्ने अभ्यास हुँँदै छन् । लोकप्रिय विषय उरालेर शिकार अन्यत्र खेलिँदै छ । तर, सबै असन्तुष्टि प्रतिगमनको मतियार हुँदैनन्, सत्ताले खबरदारीको रूपमा पनि लिन सक्छ यसलाई । नेपालगञ्ज… विस्तृत समाचार
दयालबहादुर शाही अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एक कठोर अग्निपरीक्षामा छ । त्यसै पनि मातृत्व र नेतृत्व चानचुने साधना होइन । त्यसमाथि आस, त्रास, भ्रम, जाल, निन्दा र प्रशंसाबाट अप्रभावित रहेर युग नेतृत्वको आपूर्ति गर्नु सहज कुरा होइन । जनआन्दोलनका उपलब्धिले फहराएको झण्डाको रूपमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ को प्रमुख संवाहक शक्ति नेकपाले भीरको डिलमा पु¥याउने षड्यन्त्र बाक्लिँदै गएको छ । षड्यन्त्रलाई विफल पार्दै… विस्तृत समाचार
नारायण नेपाल पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा कतिपय बेरोजगारले रोजगारी पाएका छन् भने यससँगै सामाजिक सञ्जाललाई बहस, छलफल, गालीगलौज, अभद्रता र उच्छृंखलताले ढाकेको छ । सामान्य मानवीय संवेदनासमेत बिर्सेर राष्ट्रिय मूलधारको भनिएका सञ्चारमाध्यमसमेत पक्ष÷विपक्षमा अनेक कथा लेख्न/लेखाउन उद्यत छन् । सम्झनाको पीडा र आँशुका भेल दुनियाँलाई रमिता बनेको छ । आफ्नो परिवारमा यस्तै पीडा आइपर्दा के गर्लान् यी मान्छेहरू ! सम्झना एक बीस हिउँद खाएको… विस्तृत समाचार
१४ भाद्र २०७६
राजेशचन्द्र राजभण्डारी पञ्चायती शासनमा राजा नै शक्तिशाली थिए । त्यो समय प्रजातन्त्र दिवस र राजाको जन्मदिवसमा सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी र समाजका भद्रभलाद्मीलाई अनिवार्य जानुपर्ने बाध्यता थियो । हाम्रो राजा, हाम्रो देश भट्याइनासाथ जुलुसमा जानेले अनिवार्य रूपमा प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर थप्नैपथ्र्योे । हामी पनि स्कुलबाट गएर ठूलो स्वरमा चिच्याइ–चिच्याइ हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ भन्न पाउँदा रमाउँथ्यौं । त्यतिबेला राजा–महाराजाको गुणगान गर्नु शक्तिकेन्द्रसँग… विस्तृत समाचार
नारायण नेपाल समाजमा समस्या आउँँदा, सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच द्वन्द्व चर्कंदा सञ्चारकर्मीले मध्यस्थता गर्ने प्रचलन छ । तर, आज शालिकराम पुडासैनीको मरण प्रकरणमा भने समर्थन र विरोध छरपस्ट छ । कतिपय समाचार हेर्दा लाग्छ, पत्रकारले नै सबथोक भएर फैसला गरिसकेका छन् । के देशमा अदालत, प्रशासन, कर्मचारी, प्रहरी कोही चाहिँदैन ? सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै नेपाली सञ्चार जगतले खेप्नुपरेको कालो दाग भनेको (फेक न्युज) झुटा समाचारको… विस्तृत समाचार
संकेत कोइराला एकपटक नौ अंकले आठ अंकलाई थप्पड हान्यो । पीडा सहन नसकेर आठले आँशु झार्दै सोध्यो– ‘मलाई किन हिर्काएको ?’ कत्ति पनि नहिच्किचाई उसले भन्यो– ‘म तँभन्दा ठूलो छु, त्यसैले ठटाएँ, के गर्छस् ?’ यो सुन्नेबित्तिकै आठले सातको गालामा तोरीको पूmल देखिने गरी बजायो । यो क्रम सातले ६, ६ ले पाँच, पाँचले चार, चारले ३, ३ ले दुई, २ ले एक हुँदै बढ्दै… विस्तृत समाचार
२५ श्रावण २०७६
नारायण पौडेल जम्मु–काश्मिर राज्यको निर्माण सन् १८४६ मा भएको हो । सो क्षेत्र पहिले सिख राजाको अधिनमा थियो । अंग्रेजसँगको लडाइँमा सिख राजाको पराजय भएपछि इष्ट इण्डिया कम्पनीले काश्मिर उपत्यका, लद्दाख र गिल्गिट बाल्तिस्टान क्षेत्र खोसेर जम्मुका राजा गुलाब सिंहलाई बेचेको थियो । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा सय वर्षपहिले गठित जम्मु–काश्मिर ब्रिटिश उपनिवेश मातहतको एक ‘स्वतन्त्र’ राज्य थियो । सन् १९४७ मा भारतीय उपमहाद्विपबाट ब्रिटेन बाहिरिने… विस्तृत समाचार